(US only) Free TV App အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - APKTom
(US only) Free TV App: TV Series
9.27 for Android
5.0 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
Free TV App: News, TV Shows, TV Series & Moviesテレビ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（19.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
⚠️ You need APKTom App to install .XAPK File. How to install XAPK?
၏ဖော်ပြချက် (US only) Free TV App: TV Series
ငြင်းခုန်မှု: TV App သည် YouTube ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီတတိယပါတီ API player ဖြစ်သည်။ CNN၊ ESPN၊ NFL, NBC, Fox နှင့် ABC အပါအ ၀ င် YouTube ဗီဒီယိုများ၊ ဖြစ်စဉ်များ၊ တေးဂီတနှင့်တီဗွီရှိုးအားလုံးသည် YouTube API မှတစ်ဆင့်တရားဝင် YouTube embedded player မှတစ်ဆင့်ဖွင့်သည်။ အချို့သောရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ (ဥပမာ FTV) ကိုသက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေသူများ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ streaming ပလက်ဖောင်း (YouTube မဟုတ်သောပလက်ဖောင်း) တွင်တင်ထားသည်။ , အားကစား၊ ဖျော်ဖြေမှု၊ ကာတွန်း၊ ခရီး၊ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်၊ ရေဒီယိုနှင့်အခြားအရာတစ်ခုကို App တစ်ခုထဲတွင်! ယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။
* သတင်းများ - ကမ္ဘာ့သတင်းများ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သတင်းများ၊ ရေဒီယိုများအပါအ ၀ င် - သတင်း - အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်း။ * ကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာ - ကမ္ဘာ့သတင်း၊ ရေဒီယို၊ ဂီတ၊ သတင်းလိုင်း၊ အားကစား၊ ကာတွန်း ၊ ဟောပြောပွဲများနှင့်အခြားသူများစွာ။
* အခမဲ့ - ၎င်းကိုသတင်းအက်ပ်တစ်ခု၊ တေးဂီတအက်ပ်၊ ရေဒီယိုသို့မဟုတ်တီဗီအက်ပ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
*** DISCLAIMER * **
၎င်းသည်အွန်လိုင်းမီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများမှတရားဝင်အက်ပ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းတို့၏ third party API service ၏စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာသောတရား ၀ င်မဟုတ်သော third-party client တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးထို service များ၏ဆက်စပ်မှုမရှိသောဆက်စပ်ထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ။ သူတို့၏ API developer စည်းကမ်းချက်များကိုထည့်သွင်းပါ။
* https: // developers .google.com / youtube / branding_guidelines - လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာပါက "YouTube APIs များကိုအသုံးပြုရန် (သို့) သင်၏အက်ပလီကေးရှင်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်အထူးခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါ။ ")
YouTube ဗီဒီယိုအားလုံးကိုအများပြည်သူသုံးတတိယပါတီမီဒီယာဝန်ဆောင်မှု YouTube မှပေးသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်အားလုံးသည်သူတို့၏ပိုင်ရှင်များပိုင်သည်။
သင့်တွင်နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါကဆက်သွယ်ပါ။ us: at [email protected]
ဖန်သားပြင်တွင်အသုံးပြုသောရုပ်ပုံများကိုအောက်ပါခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ၁။ မူလတီဗီလိုင်းများနှင့် ၂ ။ Creative Commons CC0 အောက်ရှိမူပိုင်ခွင့်များမရှိပါ။ စီးပွားဖြစ် application များတွင်တောင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာအားလုံးအတွက်သင်မူပိုင်ခွင့်များကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ဖြန့်ဝေပြီးသုံးနိုင်သည်။ "
ဘာအသစ်လဲ (US only) Free TV App: TV Series 9.27
- More channels added!
- App performance optimization
FREE LIVE TV APP & TV GUIDE | NO SIGN UP | NO VPN | 300+ CHANNELS
Is this still the best FREE streaming app in 2022? Over 250 live channels, hundreds of hours of VOD
🔴NEW 10,000 LIVE CHANNELS APP (NO REGISTRATION)
Over 200 Free Live TV Channels on your Firestick | Local & National News & Sports| Legal No Signup
15 Best Free Streaming Apps For 2022 | Whether you have Firestick, Nvidia Shield TV, Roku, Apple TV
FREECABLE TV App: Free TV Shows, Free Movies, News 9.24
FREECABLE© TV App: Shows, News 9.21
Vidio - Watch Video, TV & Live Streaming
iflix - Movies & TV Series
Call Blocker - Blacklist
India TV - Latest Hindi News Live, Video
Hot Apps များ
Turbo VPN - Secure VPN Proxy
VPN Super - Free VPN Proxy Server & Secure App
သင်၏အက်ပ်များကိုအဆင့်မြှင့်ရန် APKTom ကိုအသုံးပြု!